Shikhar Post » पर्यटन व्यवसायी बोधराज भण्डारीको पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई आठ सुझाव
भ्रमण वर्ष २०२० संयोजक हटाउनेदेखि पर्यटन बोर्ड खारेजसम्म
काठमाडौं, २६ साउन २०७६ । पर्यटन व्यवसायी बोधराज भण्डारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई आठ बुदे सुझाव पेश गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उहाँले सो आफ्नो सुझाव मन्त्री भट्टराईलाई पेश गर्नुभएको हो ।
उहाँले भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न संयोजक परिवर्तन गरेर सबैलाई समेट्नेगरी गर्नुपर्ने, २०२० देखि २०३० सम्मलाई भ्रमण वर्षको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने, यसअघि गठित विज्ञ समुह खारेज गर्नुपर्ने, पर्यटन बोर्ड खारेज गरेर प्रदेश प्रवद्र्धन समिति र राष्ट्रिय पर्यटन विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरु पेश गर्नुभएको छ । उहाँले मन्त्रीलाई बढि बोल्नुभन्दा पनि काम गरेर देखाउन सुझाउनुभएको छ ।
व्यवसायी भण्डारीले आफ्नो फेसबुक वालमार्फत दिनुभएको सुझावको पूर्ण पाठः
माननीय पर्यटनमन्त्रीलाई केही सुझावहरुः
१) VNY २०२० सफल पार्नु छ भने पहिले संयोजकलाई इज्जतसाथ बिदा गर्नुस् र नयाँ संयोजक (जो पूर्णत् पर्यटन क्षेत्रको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ) को नेतृत्वमा सम्पूर्ण स्टेकहोल्डरहरुलाई समेटेर आयोजक समितिको पुनर्गठन गर्नुहोस अनी नेपाल भ्रमण दशक २०२०(२०३० घोषणा गर्नुहोस अनि सन २०२० लाई उद्घाटन वर्ष, २०१९ देखि २१ लाई सम्पदा पुनर्निर्माण तथा जिर्णोद्वार वर्ष, २०२१ देखि २०२५ लाई नयाँ गन्तब्य र एड्भेन्चर स्पोर्टस वर्ष र त्यसपछिको २०२६ देखि २०३० लाई राष्ट्रिय गौरव, कला, संस्कृतिको जगेर्ना तथा प्रवद्र्धन वर्ष ! समग्रमा नेपाल भ्रमण दशक २०२०देखि ३० को रुपमा घोषणा गर्नुहोस् । यही अवस्थामा भीएनवाई २०२० स्थगन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
२) पर्यटन मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको भनिएको तर हाल अनबिज्ञ रहेको कथित “बिज्ञ समुह“ तुरुन्त खोजेर खारेज गर्नुहोस् र उपयुक्त पात्रहरु भए भ्रमण दशक आयोजक समितिमा स्थानान्तरण गर्नुहोस् ।
३) बिद्यमान नेपाल पर्यटन बोर्डलाई खारेज गर्नुहोस् । यही अवस्थाको पर्यटन बोर्ड एउटा सेतो हात्ती हो । जसलाई पाल्नु निरर्थक छ । सातै प्रदेशमा प्रादेशिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रदेश पर्यटन प्रबद्र्धन बोर्ड र केन्द्रमा राष्ट्रिय पर्यटन विकास प्राधिकरण गठन गरी नयाँ संरचना र सिराबाट साचो अर्थमा निजी–सरकारी साझेदारीमा पर्यटनको प्रबद्र्धन र विकास गर्ने अभियान थाल्नुहोस् ।
४) NAC को बर्तमान संरचनालाई बिघटन गरी पीपीपीको अवधारणामा शेयर बिक्री गरी ४ सय ९५ जनताको लगानी लगाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ब्यबस्थापन छनोट गर्नुहोस् र करारमा सन्चालन गर्न सुरु गर्नुहोस् ।
५) आफुले सम्बन्धितत विषयमा पुरै सुचना निश्चित नगरी हावाको भरमा २० लाख होइन ५० लाख पर्यटक भित्रिने, १० लाख को उपस्थितिमा निजगढ बिमानस्थल शिलन्यास गर्ने, २० हजार व्यवसायीहरुलाई टुडिखेलमा सपथ खुवाउने जस्ता विषयमा नबोल्नुहोस् । काम गरेपछि बोल्नै नपर्ने कुरा हुन् यी ।
६) भेटघाटको बहानामा जस्को पायो त्यसको जस्तो पायो त्यस्तो सल्लाह मान्ने र पछि बिबादमा परेपछि पछुताउने काम कदापी नगर्नुहोस् ।
७) ११ दिनमा ९ काम होइन १ हप्तामा १ योजना र हरयोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयनको सुनिश्चितता गर्नुहोस् । एक वर्षमा ५२ सफल कार्ययोजना भन्दाबढी कसले खोजेको छ र ?
८) उपत्यकाका सम्पदा पर्यटकका लागि दृश्यावलोकन गर्न होइन भत्केको इट्टा खसेर टाउको फुटाउन पर्खिरहेका छन् । तीनको पुनर्निर्माण नगरी के को भ्रमण वर्ष ? एक पटक निधार खुम्च्याएर सोच्नुहोस् त ?
जनता तब निराश हुन्छन् जब आशा गरिएका नेताहरु असफल हुन्छन् । हामी कसैको चाहना छैन कि तपाईं अरु झै असफल बन्नुहोस् । तपाईंको सफलतामै नेपालको पर्यटनको भबिस्य जोडिएकोले धेरै धेरै शुभकामना माननीय संस्कृति, पर्यटन पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराई ज्यू ।